Samerka oo u dareeri doona doorashada golaha deegaanka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Samerka oo u dareeri doona doorashada golaha deegaanka
La daabacay torsdag 18 maj 2017 kl 16.30
Doorashada golaha deegaanka ee "Sametinget"
Calanka qowmiyadda Samer-ka oo ka babanaya goob ta codeeynta golaha deegaanka. sawir: JONAS EKSTRÖMER / TT
Waraaqaha codeeynta ee doorashada golaha deegaanka Samer-ka oo ka dhacday xarun ku taala koonfurta Stockholm 2009.
Waraaqaha codeeynta ee doorashada golaha deegaanka Samer-ka oo ka dhacday xarun ku taala koonfurta Stockholm 2009. sawir: JONAS EKSTRÖMER / TT
Maalinnmada axadda 21 bisha may ayay dhacaysaa doorashada golaha deegaanka qoomiyadda Samer ee dalka Sweden oo ah qoomiyad laga tira badan yahay oo dastuurka Sweden uu siinayo madaxbanaani daakhli ah.
sagaal kun oo qof ayaa ku diiwaan gashan ka qayb-galka codeynta golaha deegaanka samerka ee loo yaqaano ”sameting”. Laakiin awoodda baarlamaanka uu leeyahay ayaan aheyn mid sidaas u ballaaran, ayuu yiri Jörgen Heikki oo ah weriye ka howl-gala laanta idaacadda Sameradion oo ah laanta ka tirsan Raadiyaha Sweden.
- Golaha deegaanka sametinget waa baarlamaanka ugu sareeya ee ay leeyahiin samerna. Shacabka samerka waxay dooraan doonaan 31 xildhibaan oo ka mid noqon doona golaha Sametinget.
- Laakiin marka loo barbar-dhigo baarlamaanka qaranka ee Riksdagen waa yar tahay awoodda iyo madaxbanaanida uu leeyahay golaha Sametinget. Awoodda dhabta ah ee Sweden waxaa iska leh baarlamaanka qaranka midkaasi oo soo saara sharciyada dalka lagu hago. Halka Sameting uu yahay gole ay cod mideysan dadka samer-ka kula hadlaaan dowladda oo ay ku soo gudbiyaan aragtidooda iyo dalabyadooda, sida uu sheegay Jörgen Heikki.
Si uu qofka u codeeyo doorashadan waa in uu is-diiwaan-geliyaa. Laakiin qof kasta isma diiwan gelin karo. Qofka doorasahdan iska diiiwan-gelinaya waa in uu soo buuxiyo labo shuruudood oo kale ah.
-Waa in uu ku hadlo afka samerka, ama waalidiintiis iyo waalidiintood ey ku hadlaan afka samerka. Sharuudan sal dhig waxaa u ah afka.
Shuruudda kale waxay tahay in uu qofku isku arko inuu Samer yahay.
Qodobada dorashada sannadkan ugu muhiimsan waxay salka ku hayaan arrimo la xiriira xuquuqda dhulka iyo biyaha maadama qoomiyadda samerka ay dhaqdaan xoolo cowl u eg oo la yiraahdo renar, xoolahas oo u baahan dhul daaqsimeed baaxad leh.
-Dhaqashada xoolaha rener-ka afkan lagu yiraahdo waxay u baahan tahay dhul daaqsimeed baaxad leh. Balse dhulka ay xoolaha daaqsadaan waxaa lagu hayaa daneysiyo kala duwan sida macdan ka qodis, tamar ka soo saarid, dhir-beerasho iyo weliba waddooyin laami ah oo laga dhisayo. Marka qodobkan ayaa aad muhiim ugu ah doorashadan xisbiyada matalaya dadka dhaqda xoolaha rener-ka loo yaqaano.
-Qodobada kale oo muhiimka u ah doorashadan waxaa weeye dadka samerka oo aysan nolashoodu ku tiirsaneyn dhaqashada xoolaha balse doonaya xaquuqda ugaarsiga iyo kaluumeysiga, xaquuqdas oo aysan maanta laheyn, middaas ayaa ah qodob kale oo muhiim u ah doorashadan. Sidii ay dadkan samerka ah ee xuquuqdan ka maqan tahay ay ku heli lahaayeen.
Waxaa jira xisbiyo arrintan gadaal ka riixaya, sida xisbiga ugaarsiga iyo kaluumaysiga oo ah xisbiga ugu dhumucda weyn ee golaha deegaanka sametinget, sida uu sheegay.
Musharaxiinta u tartamaya doorashadan ayaa garaaya 250 musharax. Balse waayadan dembe tirada dadka doorashadan isku diiwaan geliya way sii korortay sida uu sheegay Jörgen Heikki.
-Tirada isku diiwangelisa doorashada Sametinget waayadan dembe way sii badaneysaa, dadka iska diiwangelinaya qaarkood iskuma diiwaangelinayaan xiiso gooni ah oo ay u qabaan doorashada balse waxay isku diiwaangeliyaan sababo la xiriira aqoonsiga ama in ay taageeraan dadkooda, waxaase dhici karta in aysan xiiseyneynin doorasahdan iyo waxyaabaha looga hadlayo, ayuu yiri Jörgen Heikki oo ka howl-gala laanta idaacadda ee Sameradion.
Qoomiyadda samerka ayaa ah qoomiyad ku nool afar waddan oo ka mid ah waddammada dhaca waqooyiga Yurub. Waxay kala yihiin waddammada Sweden, Norwey, Finland iyo Ruushka. Sannadkii 2011 ayaa Sweden dastuurkeeda lagu daray in samerku yahiin dad asal ah oo leh xaquuq ismaamul deegaan. Dhaqanka samerka ayuu ka mid yahay dhaqashada xoolaha rener-ka afkan lagu yiraahdo ee cawsha u eg, sidoo kale waxay leeyahiin muusik iyo qaab heeseed u gaar ah oo ey caan ku yihiin.